အလင်းများ ရှိရာသို့ လျှောက်လှမ်းခြင်း...: ချမ်းသာခြင်း ၊ ဆင်းရဲခြင်း နှင့်ကျွန်တော်ရဲ့ အမြင်
ချမ်းသာခြင်း ၊ ဆင်းရဲခြင်း နှင့်ကျွန်တော်ရဲ့ အမြင်
မပြည့်စုံ ခဲ့တဲ့ဘ၀မှာရှင်သန် ခဲ့ ရတဲ့သူတွေ တိုင်း ကိုယ်စီကိုယ်စီ ဆင်းရဲ့ ရခြင်းအကြောင်း ကိုတွေးတော ဖူးကြ မှာပါ ။ ချမ်းသာပေမယ့် လဲ ငါဘာကြောင့်ချမ်းသာပါလိမ့်လို့ တွေးမိချင်မှ တွေးမိကြ ပါလိမ့်မယ် ။ ဘယ်လိုကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အနေနဲ့ အခြေ ခံနားလည်ထားကြတာက တော့ အရင်ဘ၀ က ပြုခဲ့တဲ့ကံ တွေ ကမကောင်းတော့ ဒီဘ၀မှာ ဆင်းရဲ တာပေါ့လေ လို့ ဖြေသိမ့် ကြပါတယ် ။ ချမ်းသာတဲ့ သူဆိုရင်လဲ အရင်ဘ၀က ပြုခဲ့တဲ့ ကံကောင်းလို့ ပေါ့ လို့မေးငေါ့ ပြီး ၀န်တိုသူတွေလဲရှိကြပါတယ်။
" ကံ " လို့သာပြောနေကြတာ ပါ ... ကံ ဆို့တဲ့အဓိပ္ပါယ် ကို မသိကြတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အများကြီးရှိကြပါသေးတယ် ။ ကံ ဆိုသည့် အဓိပ္ပါယ် ကို မသိသေးသူများ အတွက်
ကိုအောင်ဦး(ဓမ္မရသ) ရေးသားခဲ့တဲ့ Post အဟောင်းလေးကို ပြန်လည် ကူးပြီးဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
သို့ဖြစ်ပါလျှင် ဆင်းရဲ လို့စိတ်ညစ်နေမည့် အစား၊ ချမ်းသာလို့ဆို ပြီးပျော် ပျားနေမည့် အစား မိမိ တို့ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ ခန္ဓာ ဘ၀တွေ ရဲ့  ချမ်းသာစစ်ချမ်းသာမှန် ဖြစ်တဲ့ နိဗ္ဗာန်ကို မရောက် ခဲ့ရင်တောင်မှ စရံသတ်တဲ့အနေ နဲ့ သောတပန်လောက်တော့ဖြစ်အောင် ကြိုးစားထားသင့်ပါတယ်။ ဆင်းရဲ့ ချမ်းသာ မရွေး အခမဲ့ ကြင့်ကြံအားထုတ်နိုင်တဲ့ တရားတွေကို အားထုတ်ဖို့လိုမယ်မလိုဘူးဆိုတာကို ကိုယ် ပိုင်ဥာဏ် နဲ့ စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြပါ လို့ အသိပေးလိုက် ရပါတယ်။
Posted by Mr.Zaw Min Aung at 11:29:00 AM
TRUE BUDDHIST SHOULD NEVER JUDGE ANY1!
BUT MUST PREVENT FROM WRONG BELIEVER ACT!
SADDLY,WHY thanshwe KILLED MANY MONKS?
COZ HE IS WRONG BELIEVER WHICH MEANS HE IS JUST NAMELY BUDDHIST!
HE IS NOT TRUE BUDDHIST!
THANKS 4UR POST&MORE POWER!!!!!!!!!!!!!!!!